DF iyo Puntland oo heshiis is afgarad ka gaaray arrinta Shahaadada D/sare – AfmoNews
DF iyo Puntland oo heshiis is afgarad ka gaaray arrinta Shahaadada D/sare
Dowladda Federaalka iyo Maamulka Puntland ayaa maanta heshiis is afgarad ah ku gaaray in ardayda Puntland ee dhameysay waxbarashada Dugsiga Sare loo fasaxo Shahaadada Federaalka.
Kulan ay Wasaaradaha Waxbarashada ee labada dhinac ku yeesheen Magaalada Garoowe ayaa laga soo saaray bayaan ka kooban saddex qodob, oo lagu cadeynayo in Shaahadada Dugsiga Sare loo fasaxay ardayda reer Puntland.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in ardayda Puntland ee dhameysay Dugsiga Sare loo fasaxay Shahaadada Federaalka, taasoo laga heli doono Xarunta Dhexe ee Wasaaradda Waxbarashada Federaalka iyo Xarunta Dhexe ee Wasaaradda Waxbarashada Puntland.
Bayaanka waxaa cad in lagu heshiiyay in la isugu yimaado shirweyne looga arrinsanayo waxbarashada dalka.
Heshiiskan is afgaradka ayaa imaanaya, xilli aanay wafdiga Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxda Puntland wax is af garadka ahi ka gaarin shirkoodii uga socday Magaalada Garoowe, ee hadlayay arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Rooble iyo Midowga Musharaxiinta oo markale ku kulmaya Hotel Decale
Israel iyo Maxkamadda Adduunka oo qoorta iskula jira
Shirkii uu Madaxweyne Farmaajo ku baaqay oo u muuqdo in uu fashilmay